NayaPatro Blogs: यी १० कुरा नजाने सेयरबाट कमाइन्न !
नेपाल र अन्य देशका सेयर बजारमा थुप्रै सफलताका कथाहरु छन् । सेयरमा लगानी गरेर करोडपति हुनेहरुका यस्ता कथा हाम्रा लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन् । तर, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि अधिकांश लगानीकर्ता र सेयर कारोबारी सेयरमा लगानी गर्दा डूबेका पनि छन् । उनीहरुको असफलतालाई पनि पूरै बेवास्ता गर्न मिल्दैन, कारण ती असफलताहरुबाट समेत हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौ । सफलता र असफलताका विभिन्न कथाहरुबीचबाट हामीले यहाँ सेयरबाट पैसा कमाउने १० महत्वपूर्ण टिप्सहरु तयार गरेका छौ। १.लगानी गर्नुअघि विशेष ढंगले सोच्नुहोस्आत्मविश्वास र दृढता सेयर बजारका महत्वपूर्ण सूत्र...
पूँजी बजारमा लगानी गरेर धेरै लगानीकर्ताहरुले कमाउने र गुमाउने प्रक्रिया चलिरहन्छ । यसलाई नियमित चक्र पनि मानिन्छ । नेपालको पूँजी बजारमा विशेषतः मारवाडी समुदाय, जागिरे, व्यापारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सक्रियता रहँदै आएको छ। सेयर बजारबाट करोडपति भइने भन्ने मान्यतालाई पछ्याउँदै आजकल विद्यार्थी तथा युवाहरुको समेत बजारमा प्रवेश भइरहेको छ । आज हामी सेयर बजारको भीडमा यस्तै केही पात्रलाई प्रस्तुत गर्दैछौ, जसले सानो लगानी गरेर आफ्नो गर्जो टारिरहेका छन् र उनीहरु विद्यार्थी तथा युवाहरुका लागि प्रेरणाको स्रोत समेत बन्नसक्छन् । युवा अवस्थामा...
सेयर बजार रहस्यमय हुन्छ । यसको गति कहाँ रोकिन्छ र कहाँ गएर अगाडि बढ्छ, कसैले भन्न सक्दैन । तर, केही अनुभवको प्रयोग गरी भाग्यले साथ दिए, बजारमा सही समयमा प्रवेश गर्न र बाहिरिन सकेको खण्डमा सेयरबाटै करोडपति बन्न सकिन्छ । हिम्मत र सुझबुझका साथ राम्रा कम्पनीका सेयर खरिद गरेर धैर्यता राखी बजारबाट करोडपति बनेका केही प्रतिनिधिपात्रमध्ये फरक प्रोफेसनका एक इञ्जिनियरको सफलताको कथा पनि कम रोचक छैन । ललितपुरको भैंसीपाटी बस्ने पेशाले इञ्जिनियर, तर नामूद सेयर कारोबारी प्रकाश पोखरेल आँट र हिम्मतले सेयरबाट सफल भएका एक उदाहरणीय पात्र हुन् । धैर्यताले सेयर बजारमा करोडपति...
सेयरबजारमा गरिने लगानीमा प्रतिफल सामान्यतया बैंकमा राखिने सामान्य निक्षेप र मुद्धतीमा भन्दा धेरै बढी हुने गर्दछ । तर सेयरमा जोखिम पनि अधिक हुने गर्छ र प्रतिफलको पनि कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । तर, जानेबुझेर लगानी गर्ने हो भने सेयरबाट फाइदा भने अवश्य हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले कम्पनी छनौट गर्दा धेरै पक्षहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ, जसकारण कम्पाउण्ड रिटर्न राम्रो आउँछ अर्थात प्रतिफल अपेक्षा अनुसार सन्तोषजनक हुनेछ । तर यथार्थमा हेर्ने हो भने धेरै लगानीकर्ताहरुले आशा गरे अनुसार सेयरबाट नाफा आर्जन गर्न सकेका छैनन् र यसको प्रमुख कारण केही निश्चित पक्षहरुमा ध्यान...
एउटा निर्णयले जसको भाग्य बदल्यो, एकवर्षमै कमाए ५० हजार करोड !
कतिपय अवस्थामा तपाईले जीवनमा लिएका केही महत्वपूर्ण निर्णयले कायापलट गरिरहेको हुन्छ। हामीले चर्चा गर्न लागेका यी व्यक्तिको जीवनमा पनि यस्तै भयो । यी व्यक्तिको एउटा निर्णयले उनको भाग्य मात्र चम्किएन, उनलाई रातारात भारतका धनाढ्यहरुको सूचिमा समेत सामेल गरिदियो । त्यो एउटा निर्णय यति शक्तिशाली साबित भइदियो कि यी व्यक्तिको आफ्नो परिवारको सम्पत्ति केही महिनाभित्रै अचाक्ली बढेर ५० हजार करोड भारु भइदियो । यी व्यक्तिको बिषयमा यस्तो पनि भनिन्छ कि उनले जहाँ पैसा लगाउँछन्, अहिलेसम्म कहीँ पनि घाटा खाएका छैनन् । हामी यहाँ भारतका निकै ठूला र...